Travis Scott ရဲ့ Instagram အကောင့် ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Entertainment/Travis Scott ရဲ့ Instagram အကောင့် ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ ? ? ?
Travis Scott ရဲ့ Instagram အကောင့် ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ ? ? ?
ဇနီးဖြစ်သူ Kylie Jenner အပေါ် ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေနဲ့များ သက်ဆိုင်နေမလား ? ? ?
အမှန်ကတော့ Travis မှ သူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်ကို သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဖျက်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်လောက်ကလည်း Travis အနေနဲ့ Kylie အပေါ် ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ငြင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ Kardashian ညီအစ်မတွေအနေနဲ့လည်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း Social Media များမှာ သတင်းပေါင်းစုံနဲ့ ဂယက်ရိုက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီိးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ချို့ကလည်း Travis ဖောက်ပြန်နေတာကို သက်သေအထောက်အထားတွေ ရရှိထားကြောင်း Kylie မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့ပြီိး Travis ကို သူ့ရဲ့ Show ပွဲတွေ ဖျက်သိမ်းခိုင်းလိုက်ပြီး အိမ်မှာပဲနေစေကာ ပြသာနာကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းခိုင်းထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Previous ရည်စားဟောင်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ပူပန်သောကရောက်နေရဆဲဖြစ်နေတဲ့ Ariana Grande
Next ????????????????????????? ???????????? ??????????????????????